एमाले-माओवादी एकता घोषणा नहुने ! किन लाग्यो ब्रेक ? — Imandarmedia.com
एमाले-माओवादी एकता घोषणा नहुने ! किन लाग्यो ब्रेक ?
पार्टी एकतासम्बन्धी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदलले वैशाख ९ मा पार्टी एकता गर्न सुझाएको थियो । त्यही दिन घोषणा गर्ने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक तयारी अघि बढाउने भनिएको थियो ।
तर, वाम एकता संयोजन समिति बैठकले एकताको औपचारिक मिति तय गर्दै दुई दलबीच विवादित विषय निरूपण नगर्दा दुवै दलमा संशय छाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि गत २२ गते समितिको बैठक बसेको थियो ।
पछिल्लो ३० सचिव सरुवा प्रकरणलाई लिएर माओवादी मन्त्रीहरू रुष्ट छन् । एकीकृत पार्टी नभएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले एउटै पार्टी भएपछि झन् बढी दबदबा कायम गर्न सक्ने शंका माओवादीले गरेको छ ।
यो विषयमा कुरा गर्न मन्त्रीहरूले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह पनि गरिसकेका छन् । ‘एउटै पार्टी मात्र हुँदा त छलफल हुन्छ तर अहिले फरक–फरक पार्टी अस्तित्वमा रहँदा पनि सामान्य छलफल गरिएन, छलफल गरेरै उहाँलाई लागेको निर्णय गरेको भए केही बिग्रिने थिएन,’ माओवादीका एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले आगामी दिनमा पार्टीभित्रको कार्यशैली पनि यही ढंगको हुने हो कि भन्ने लागेर एकपटक कुरा गर्न अध्यक्षलाई आग्रह गरेका छौं ।’
यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सन्दर्भमा औपचारिक कुराकानी भयो । तर, पार्टी एकता र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा कुराकानी हुन सकेको छैन ।
बुधबार एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल बिरामी भएको भन्दै स्थगित गरियो । दाहालको अस्वस्थता शारीरिक हो कि राजनीतिक भन्नेबारे अहिले दुई दल वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
दाहाल बिहीबार चितवन पुगेका छन् । शुक्रबार पनि उनी त्यहीँ रहनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार कर्णाली जाने कार्यक्रम छ । उनी वैशाख १ गते शनिबार रारामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।
त्यसैले अझै दुई दिन एकतासम्बन्धी बैठक बस्ने छैन । एकताका लागि अनौपचारिक रूपमा तय गरिएको मिति आउन करिब एक साता बाँकी रहँदा विवादित मुद्दा टुंगो लाग्न नसकेपछि संशय बढेको हो ।
यद्यपि पार्टी एकताकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै एमालेले बोलाएको वैशाख ६ को पोलिटब्युरो र ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठक भने यथावत् छन् । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ।